အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို 2015 - သတင်း Rule
အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို 2015
Periscope နှင့်ဓမ္မကနေ Apple ကဂီတမှ, Google ဓါတ်ပုံများ, YouTube ကိုဂိမ်းနဲ့ Pacemaker: ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးအသစ်က iOS app များ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို 2015 - Apple က Spotify ပြိုင်ဆိုင်မှုထုတ်ဖော်ပြသ” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 25 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 13.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
လေ့လာဆန်းစစ်သူကုမ္ပဏီ Forrester ကသုတေသနအဆိုအရ, စမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များဖြုန်း 85% apps များ အသုံးပြု. သူတို့အားကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်းတို့၏အချိန်ရဲ့, ဒါပေမဲ့ 84% ထိုကာလ၏သုံးစွဲသည် ကိုယ့် app ငါးခုကို အသုံးပြု. ပြီးသားသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်ကြိုတင်မခဲ့.
ဒါကအသစ် apps များ WhatsApp ကိုသို့မဟုတ် Candy Crush အရွယ် hits ဖြစ်လာဖို့ကဒါခက်ခဲတဲ့ရဲ့အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်: သူတို့ရဲ့ developer များကသူတို့ကို download လုပ်လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လျှင်ပင်, သူတို့ကိုမှန်မှန်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ရတဲ့လုံးဝအခြားစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ဆဲ, ပဒေသာကြိုးစားနေကြပါတယ်, နှင့် 2015 အချို့သောတီထွင်အတွေးအခေါ်များကို App Store တွင်ဖြန့်ချိသည်ကိုမြင်. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ roundup င် 25 နှစ်မှစ. အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က iOS app များ. အန်းဒရွိုက်ရွေးချယ်မှုဟာသင့် platform သည်ဆိုပါက, သည်သီးခြားနှစ်ကုန်စာရင်းလည်းမရှိ ဒီမှာ. ဤအတောအတွင်း, သငျသညျ၏အကောင်းဆုံး iOS ကိုဂိမ်းရှာနေမယ်ဆိုရင် 2015, ဒီ roundup ဖတ်.
ကျွန်တော်တို့သော်လည်းအဘယျသို့လွဲချော်ရပြီ? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းသစ်ကိုကွက iOS app များအဘို့သင့်အကြံပြုချက်များသည်အဖွင့် (သို့မဟုတ်ပင်ပဲသငျသညျသစ်) တွင် 2015.
25. ကြယ်ပွင့်လမ်းလျှောက် 2
တချို့က apps များ '' အဓိကအကျိုးကျေးဇူးသူတို့သည်သင့်မျက်နှာပြင်မှာရှာဖွေနေမပိုအချိန်ဖြုန်းကိုကူညီကြောင်း, နှင့်စတားလမ်းလျှောက်2သူတို့ထဲကတစျခုဖွစျသညျ. အပျော်တမ်းကြယ်များကြည့်ရည်ရွယ်, သင်တို့ကိုကြယ်များခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီပေးသည်, နက္ခတ်, အထက်မိုဃ်းတိမ်ထဲမှာဂြိုလ်နှင့်ယျတံခှနျ, နိမ့်ဆုံးမှမျက်နှာပြင်-အလင်းဖြတ်ဖို့ထူးဆန်းသော nebulae နှင့်တညဉ့်အချိန် mode ကို၏ 3D မော်ဒယ်များနှင့်အတူ.
တင်းကြပ်စွာစကားပြော, Grayout ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ "အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတ္ထု" အောက်မှာဖြည့်စွက်တာပါ. သို့သော်သင်ကခွဲခြား, ဒီအံ့ဩဘွယ်ဖြစ်၏: တူညီတဲ့ developer ၏စဉျးစားစရာဆင်ဆာဂိမ်းတစ်ခု prequel Blackbar. ဆေးရုံအတွက် Set, ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းရှာတွေ့မှသင် "Post-စိတ်ထိခိုက် aphasia" ညှိနှိုင်းရှုမြင်.
သတိသမ္သတင်းအတွက်ယခုနှစ်အများကြီးခဲ့သည်, အပလီကေးရှင်းများ Moodnotes တစ်အမြတ်ထုတ်ရန်မျှော်လင့်အတူ. ဒါဟာသင်မည်သို့ခံစားရကိုခြေရာခံရန်သင့်အားရရှိသွားတဲ့တဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုဂျာနယ်င်, တစ်မှောငျသို့ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း "စဉ်းစားထောင်ချောက်" ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအဘို့အအချို့သောအကြံပေးချက်များအကြံပြုခြင်းစဉ်. ၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုဖြစ်စဉ်ခံထားဘယ်တော့မှခဲ့သိနိုင်ပါတယ်.
22. Instagram ကိုမှ layout
ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ Instagram ကိုအတွင်းအင်္ဂါရပ်မဒီသီးခြား app ကိုသည်အဘယ်ကြောင့်အံ့ဩဖို့တရားမျှတမေးခွန်းရဲ့, ဒါပေမယ့် Layout ကိုတစ်ဦး slick နှင့်လက်လှမ်းဓာတ်ပုံ-collage tool ကိုဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်မပါဘူး. သင့်ရဲ့ရိုက်ချက်များကိုရွေးချယ်ပါ, multi-image ကိုဘောင်၌သူတို့ကိုစီစဉ်, ပြီးတော့သူတို့ကိုမျှဝေသို့မဟုတ် save - Non-Facebook ကလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မျှဝေဘို့နေရာလေးကိုအဆုံးစွန်သော.
အဘယ်သူသည် YouTubers ကို '' ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ဆပ်မယ်လို့, သူတို့ YouTube ပေါ်မှာအားလုံးအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်ကြောင်းပေးထား? အိုးကိုထွက်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းကြိုးပမ်းခဲ့သည်, က YouTube ကိုထိခင်မှာအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြယ်တစ်အကွာအဝေးကနေအသစ်သောအကြောင်းအရာရာပူဇော်သက္ကာ. ဂီတ၏က၎င်း၏အရောအနှော, £ 2,29 တစ်လရုပ်ရှင်ဘလော့ဂ်နှင့်ဟာသအယူခံများများရှိခဲ့ပါတယ်.
20. MyHeart အရေအတွက်
၎င်း၏ကျန်းမာရေးပဏာမခြေလှမ်းနှင့်အတူ Apple ရဲ့ရည်မှန်းချက်အခုအချိန်မှာက iOS အကြောင်းကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအရာအချို့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကနှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်အပါအဝင်. အတွက်ဗြိတိန်မှအမေရိကန်ကနေကူးသော - စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ MyHeart app ကိုမှတ်တော်မူ၏ 2015 - ဥပမာကောင်းခဲ့: ကောငျးစှာအသုံးပွုသငျ့နှလုံးဒေတာချပြီး.
အိုင်ပက်-သာ Electricomics touchscreen က device များအတွက်ရုပ်ပြနှင့်ဂရပ်ဖစ်တ္ထုအားပြန်လည်စဉ်းစားရန်နောက်ဆုံးကြိုးစားမှုခဲ့သည်. အလန် Moore ကမှရုပ်ပြနှင့်အတူအပြီးအစီး, Garth Ennis, လအော Moore ကနှင့်ယောဟန် Reppion, နဲ့ပတေရု Hogan, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသတိထားပြသ (အစားပြပွဲ-အရာရှိများထက်) တကယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အသုံးပြုမှုလတ်မှထည့်ပါနိုင်.
18. Iain သစ်တော်သီးများက Arcadia
အထူးသဖြင့်ဒီအလတ်စားများအတွက်စာရေးဆရာ Iain သစ်တော်သီးကရေးသားနေတဲ့ဝတ္ထုနှင့်ပိုမိုအပြန်အလှန်တ္ထု. ၎င်း၏အကိုင်း storyline ကိုခြေရာခံ 10 ဇာတ်ကောင် '' လမ်းဆုံပုံပြင်များ, နှင့်၎င်း၏နီးပါး tubemap ကဲ့သို့သော interface ကိုအလွန်လိမ္မာပါးနပ်ခဲ့စဉ်, ထိုအရေးအသား၏အရည်အသွေးဒီအစဉ်အမြဲနေတဲ့ဝတ္ထုနဲ့တူခံစားခဲ့ရသိနိုင်ပါတယ်, အစားဒစ်ဂျစ်တယ် gimmick ထက်.
17. Office ကိုမှန်ဘီလူး
သငျသညျအစဉျအမွဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများအတွက် scribbled-အပေါ်ဝှိုကျဘုတျ၏ဓာတ်ပုံကိုယူပြီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အကယ်., Office ကိုမှန်ဘီလူးကြည့်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်. ဘေးကင်းလုံခြုံသိမ်းဆည်းဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုသို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များနှင့်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများလှည့်အဘို့ကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများအတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့သည်ကောင်းသော, it’s become one of the most useful work-related apps since its launch in April.
တွင် 2014, Pacemaker wasaslick DJing app for iPad that tapped Spotify for its music. တွင် 2015, သော်လည်း, it became something even more interesting: an iPhone app with its own artificial-intelligence helper (called Mållgan) that will construct mixes for you – complete with the ability for you to tweak them at will.
Alreadyahit on Android, Camera51 has been just as impressive on iOS as an alternative to the built-in camera software. Its emphasis is on helping you with your framing and composition, whether you’re snapping objects, landscapes or people (selfies included, ဒီဖြစ်စဉ် 2015).
10. Apple ကဂီတ
Apple thankfully remembered that women have needs beyond discovering music this year, နှင့် added period-tracking to its Health app. But Eve (formerly called Ruby) is worthalook as an alternative for tracking everything from periods and stress to sex, withawider community to tap for advice.
A fine daytime complement to Star Walk 2’s night-time stargazing, Detour is an app for on-foot wanderers. It offersaselection of audio tours, starting with San Francisco but now with London, ပဲရစ်, Berlin and Barcelona among other cities. From Backstage Westminster to Radical Clerkenwell, it could shed new light on London for Londoners, not just tourists.
3. Google ဓါတ်ပုံများ
Live-streaming video often doesn’t make sense … until some live video turns up that does – from breaking news events to celebrities chatting to fans. Acquired by Twitter before its launch in March on iOS then May on Android, Periscope is quietly becomingavery interesting addition to the media: as our piece on how Bild reporter Paul Ronzheimer used it to cover the Syrian refugees story ပြသ.
• The best apps of 2014 Android အတွက်, iPhone and iPad
← ၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2015 သမ္မာတရားကိုထွက်ရှိဟုန်းဟုန်းဖြစ်ပါတယ်: အဘယ်ကြောင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံပိုမြန်ယခင်ကထက်ပြန့်နှံ့ →